Ihotele yehlabathi ifuna ukuxabana okuphezulu kunye neendleko ezikhuphisanayo
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba zaseYurophu » Ihotele yehlabathi ifuna ukuxabana okuphezulu kunye neendleko ezikhuphisanayo
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Utyalo mali • Iindaba zeLuxury • iindaba • Ukwakha kwakhona • Resorts • Xanduva • Tourism • Intetho yezoKhenketho • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Abahambi babuya kwiinqwelomoya okanye babetha indlela ngekhefu elifunekayo ukusuka emsebenzini wasekhaya-monotony kunye nokugcwala kakhulu kweNetflix.
NgoJuni 25, 2021, abantu abayi-2,137,584 badlula kwizikhululo zeenqwelo moya zase-US, ngokwe-TSA.
E-US, apho amazwe amaninzi kunye noomasipala bayaqhubeka nokuzola iiprothokholi ze-COVID, ingeniso yehotele iqhubekile nokuhamba kwayo ngoMeyi.
Iihotele zaseYurophu zishiya eminye imimandla njengoko amazwe amaninzi eqhubeka nokusebenzisa imigaqo ethintela ukubuya.
Ngobhubhane wehlabathi obonisa ezinye iimpawu zokuyeka, umzi mveliso wehotele ngokudibeneyo uvuna umvuzo, njengoko abahambi bebuyela kwiinqwelomoya okanye betha indlela ngekhefu elifunekayo elivela emsebenzini wasekhaya nasekhaya kunye nokugcwala kakhulu kweNetflix. Umzi mveliso wehotele uyakuvuyela ukubamkela kwakhona, kodwa ukusilela kwemali okuqhubekayo-imveliso yamacandelo athile engekabuyi nomdlandla, njengamashishini kunye neqela-encediswa kukuhamba kweendleko kunye nemarike yomsebenzi enzima kakhulu, ineziphumo kumgca ongezantsi.
NgoJuni 25, 2021, 2,137,584 abantu badlula kwizikhululo zeenqwelo moya zase-US, ngokwe-TSA, inani elalingama-78% yetotali kaJuni 25, 2019, kunye ne-237% ngaphezulu kunangoJuni 25, 2020. Abantu bayahamba kwakhona, kuthetha ukuba bahlala kwiihotele kwakhona.
Kwi i-USA, apho uninzi loomasipala kunye noomasipala baqhubekeka nokuzola iiprothokholi ze-COVID, ingeniso iqhubekile nokuhamba kwayo ngoMeyi, nge-RevPAR inyuke nge-539% ngexesha elifanayo kunyaka ophelileyo, kodwa i-51% isezantsi kuno-Meyi 2019. Ngamagumbi ingeniso ekhuthazwe licandelo lokuzonwabisa. Ingeniso iyonke ilandelwe, ukuya kuthi ga kwi-127 yeedola kwigumbi ngalinye, ukonyuka ngama-541% ngexesha elifanayo kunyaka ophelileyo.
Iindleko zabasebenzi ziphantse $ 20 kwigumbi ngalinye ukusukela ngoMeyi odlulileyo, indleko ekufuneka iqhubeke nokunyuka njengoko abanini behotele befumanisa ukuba kufuneka bakhuphe ngakumbi kwaye bongeze inkuthazo yokurhwebesha abasebenzi abangasakwaziyo ukubuyela kwimisebenzi yokwamkela iindwendwe okanye abatshintshileyo iindlela.
Ukusebenza ngokukuko kwigumbi ngalinye kufikelelwe kwi-40.55 yeedola ngoMeyi, ukwanda ngama-319% ngexesha elifanayo kunyaka ophelileyo, kodwa ama-63% asezantsi kunoMeyi 2019.
Iihotele zaseYurophu zishiya eminye imimandla njengoko amazwe amaninzi eqhubeka nokusebenzisa imigaqo ethintela ukubuya. Ngomhla ka-Meyi, iihotele zinokuhlanganisa kuphela i-TRevPAR ye- $ 49.83, eyakhokelela ekuqhawukeni phantse kwe-GOPPAR ye- € 2.52, ethi, nangona iphantsi kakhulu, yayiyinyanga yokuqala yenzuzo entle kulo mmandla ukusukela ngoSeptemba 2020.
Iindleko zomsebenzi zizonke ngenyanga zibethe i-23.76, eyayingama-46.8% ngaphezulu kunangexesha elifanayo kunyaka ophelileyo, kwaye kuphela i-6 yeerandi ingaphantsi kwamagumbi e-RevPAR.
Ukunyuka okuqinisekileyo kwe-APAC
EAsia-Pacific, ukhenketho olomeleleyo lwasekhaya lunempembelelo enkulu ekusebenzeni kwehotele yommandla. UKUHLAZIYISWA kwinyanga ebetha i-59.07 yeedola, eyayiyi-141% ephezulu kunangexesha elifanayo kunyaka ophelileyo. Yayiqiniswa ngumyinge wama-50% wokuhlala kwabantu kunye nokunyuka kwe-ADR, eyabetha i-118 yeedola ngenyanga. I-TRevPAR ye- $ 106.39 yayiyimveliso yokunyuka okuqhubekayo kwingeniso encedisayo, njengoko i-F & B RevPAR ifike kwi-40.77 yeedola ngenyanga kaMeyi, i-152% ephezulu kunangexesha elifanayo kunyaka ophelileyo.
Ukumba kwimali engenayo yayiziindleko eziphezulu, ezazithi, ngexabiso leedola ezingama-30.26 kwigumbi ngalinye, zaphakama nge-44.9% kwangelo xesha linye kunyaka ophelileyo kwaye i-12 yeedola ingaphantsi kuno-Meyi 2019. I-GOPPAR ngenyanga ingene nge-27.55 yeedola, i-1,040% ephezulu kune-Meyi 2020. , kodwa kungaphantsi kwesiqingatha sikaMeyi 2019.
UMbindi Mpuma Wenza UMarko
Ngokufana ne-APAC, uMbindi Mpuma ukhwele isaphulelo esihle ngasemva kwamanqanaba aphezulu kunye nokunyuka kokuhlala. UKUVUSELELWA ngenyanga kwarekhodwa kwi-76.57 yeedola, i-222% inyuke ngaphezulu konyaka ophelileyo, inceda ekukhokeleni i-TRevPAR ye- $ 120.88, i-228% inyuke ngexesha elifanayo kunyaka ophelileyo.
Okwangoku, njengoko iindleko zabasebenzi zihlala zizinzile, ndineentloni ze- $ 40 kwigumbi ngalinye, i-GOPPAR ifike kwi-37.29 yeedola ngenyanga, i-430% ephezulu kunangexesha elifanayo kunyaka ophelileyo. UMbindi Mpuma ngoku uneenyanga ezili-10 zilandelelana zentsebenzo yenzuzo elungileyo.
I-Rowdy Frontier Iinqwelo-moya zabagibeli ezihanjiswe eSitulo
Ukulawulwa kwenkunkuma okungalunganga kwe-COVID kunokunyusa intsholongwane ...
Ezona ndawo zidumileyo zegalufa / iiholide eMelika
Ukuhamba kweengozi zabahambi eSiberia, Bonke abali-19 bebhodi ...